Ekoatera no namarana ny volana martsa - The World March
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Nifarana ny World Martsa i Ekoatera
Ny Admiral Illingworth Naval Academy no toerana namaranana ny volana martsa faha-2
La Admiral Illingworth Naval Academy no toerana famaranana ny 2ª Martsa Manerantany ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana, toko any Ekoatera. Mpianatra, mpampianatra, ray aman-dreny ary vahiny manokana nivory tamin'ity hetsika ity.
Nanomboka tamin'ny fidiran'ny manam-pahefana ao amin'ny Akademia Naval, Sonia Venegas Paz, filohan'ny Association World without Wars ary tsy misy herisetra miaraka amin'ny mpikambana maro ao aminy, ny lanjan'ny Commando platoon ary ny brigade iraisam-pirenena sivily, ity farany dia misy. mpianatra mitondra sainam-pirenena any amin'ny firenena samihafa.
Miaraka amin'ny feon'ny amponga, amponga, bass, tononkira ary kipantsona, ny tarika mpiady amin'ity ivontoerana fianarana ity dia nanolotra ny hetsika ary nandoa vola an'arivony tonga maro tamin'ity andro mahafinaritra manerantany ity.
Ny fanolorana ilay hetsi-panoherana dia niandraikitra ny mpisolovava Iván Vaca Pozo, talen'ny Culture of the Academy izay nanentana ireo mpianatra hamboly ao amin'ny efitranony tsirairay avy ny kolontsaina fandriampahalemana sy tsy famoretana. Ankoatr'izay dia nisaotra ny tsy fankatoavan'i Mundo Sin Guerras Ecuador izy rehefa nanasa azy ireo handray anjara amin'ny volana Martsa amerikanina voalohany ary izy ireo no hamarana ny volana martsa faha-1 eto amin'ny firenentsika.
Tsy afa-bela mihitsy ny famonoana an'ohatra olombelona, ​​samy nandray ny toerany ireo karatra tsirairay mandra-pahazoany famantarana ny fandriam-pahalemana. Ary nisy koa vondrona hafa misy fonon-tanana fotsy teny an-tanany nanandrana ny sidin'ny voromailala iray, raha ny mpandrindra kosa dia nandatsaka fo lehibe, vita amin'ny balaonina, nankany an-danitra.
"Fantaro fa azonao atao ny ho azo atao, esory ny tahotrao ..." dia ny tonon-kiran'ny tononkira noforonin'i Lilly Chele, avy amin'ny fizarana fototra momba ny vehivavy, izay nihira ny hira Color Esperanza ho an'ny besinimaro, manantena izahay fa hanana karazana karazany hafa ny fifanenjehana eo amin'ny zanak'olombelona.
Farany, noho ny fikambanana Colors for Peace Association any Italia, dia nanasa ny hitsidika ny fampiratiana ireo sary hosodoko 120 namboarina ny ankizy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny mpanatrika.